दोस्रो दाङ लिट्रेचर फेस्टिभल २०७७ असोज पहिलो साता – Rajmarg Online
आश्विन १२ , २०७७ - सोमबार
दोस्रो दाङ लिट्रेचर फेस्टिभल २०७७ असोज पहिलो साता
दाङ, २९ भदौ। उदाहरण समूह नेपालले असोजको पहिलो हप्ता दाङमा ‘दोस्रो दाङ साहित्य महोत्सव’ गर्ने भएको छ । असोज १, २ र ३ गते हुने महोत्सवमा देशभरिका करिब ३ दर्जन साहित्यकारले भाग लिने आयोजकले जनाएको छ ।
समूहले अघिल्लो वर्षदेखि महोत्सव आयोजना गर्न थालेको हो । यस पटकको साहित्य महोत्सव भने भर्चुअल हुने महोत्सवका संयोजक विष्णु सन्न्यासले जानकारी दिएका छन् । ‘यस वर्ष पनि हामीले दाङको भूमिमै उभिएर देशभरिका लेखक, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ उभ्याउने भनेका थियौं । तर, विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै अनलाइन गर्न लागेका हौैं,’ उनले भने ।
दोस्रो दाङ लिटरेचर फेस्टिभलमा ११ वटा सेसन सञ्चालन हुनेछन् । दाङ थारु समुदायको थातथलो भएकाले असोज १ गते पहिलो सेसन नै थारु भाषाको कविता विशेष ‘हमार माटि, हमार कविटा’ बाट महोत्सव सुरु हुने संयोजक सन्न्यासले सुनाए ।‘विभिन्न भूगोल वा माटोमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्मको आफ्नै सौन्दर्य हुन्छ,’ सन्न्यासले भने, ‘दाङको सौन्दर्य थारु भनेकै थारु समुदायको हो । थारु समुदायको भाषा, साहित्य र संस्कृतिबिना दाङको नवीन परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।’ उनले १० जना थारु भाषाका साहित्यकारले मातृभाषाबाट कविता सुनाउने जानकारी दिए ।
महोत्सवमा संस्कृतिविद् प्राडा. जगमान गुरुङ, लेखक सञ्जीव उप्रेती राजन मुकारुङ, भूपाल राई, राजनीतिज्ञ गगन थापा, विद्या भट्टराईदेखि साहित्यका पछिल्लो पुस्ताको समेत उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएको छ ।असोज १ गते महोत्सवको पहिलो सेसन ‘हमार माटि, हमार कविटा’ ११ बजेदेखि सुरु हुने छ । सेसनको सहजीकरण साहित्यकार छविलाल कोपिलाले गर्नेछन् । सोही दिनको १ बजेदेखि सुरु हुने दोस्रो सेसन ‘झण्डाको राजनीति’मा प्राडा जगमान गुरुङ र भूपाल राईबीच बहस हुनेछ । सेसनको सहजीकरण गुरुङ सुशान्तले गर्नेछन् ।
महोत्सवको पहिलो दिन ३ बजे ‘पर्यटनमा दाङको अनुहार’ सेसन हुनेछ । पहिलो दिनको तेस्रो तेस्रोे सेसनमा दाङको पर्यटकीय क्षेत्रबारे घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी, पर्यटनविद् प्राडा गोविन्दराज आचार्य र जीतेन्द्रमान नेपालीले वक्ताको भूमिका निभाउनेछन् । उक्त सेसनको संयोजक डा. शिवकुमार सुवेदीले गर्नेछन् । सोही दिनकै अन्तिम सेसन साँझ ५ बजे हुने भएको छ । ‘कोभिड १९ ः भ्रम र यथार्थ’ विषयक सेसनमा प्राडा प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिनेछन् ।
महोत्सवको अन्तिम दिन असोज ३ गते पहिलो सेसन उदाहरण समूह विशेष हुनेछ । ११ बजेदेखि सुरु हुने सेसनमा समूहमा आबद्ध अभियनताले आआफ्ना कविता सुनाउने छन् । ‘उदाहरण समूह’ सेसन विष्णु सन्न्यासले सहजीकरण गर्नेछन् । सेसनमा दर्जन बढी कविले आफ्नो कविता सुनाउनेछन् ।
प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार ४२२ पुग्यो
गढवामा गरिब घर पहिचान तथ्यांक संकलन सिद्धियो
घोराहीमा ८६ वटा कुकुर बिरालोलाई रेबिज बिरुद्धको खोप दिईयो
दाङका जनप्रतिनिधी विद्यालय भर्ना
पहिरोले पुरिँदा जेसिबी चालकको मुत्यु
तुलसीपुरमा थप १ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,संक्रमित हुनेको संख्या २२५
पत्रकार पीडित र शर्माको पहलमा मैतीको नि:शुल्क उपचार